Hiran State - News: Guddoomiyaha Maxkamadda Sare HS oo digniin u diray kooxaha aan cidna metelin ee ku qaraabanaya magaca Hiiraan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare HS oo digniin u diray kooxaha aan cidna metelin ee ku qaraabanaya magaca Hiiraan.
HS:-Guddoomiyaha Maxkamadda Sare HS oo digniin u diray kooxaha aan cidna metelin ee ku qaraabanaya magaca Hiiraan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dowlad goboledka Hiran State Mudame C/qaadir Rooble Naxar oo war saxaafadeed ka soo saaray magaalada Nairobi ayaa ku tilmaamay Shir lagu qabtay magaalada Nairobi ee lagu sheegay in lagu mideynayo maamul goboleedyo uu yahay mid u qaasa Gobollada Mudug iyo Galgaduud ee aysan wax shaqo ah ku lahayn bulshada reer Hiiraan.
Bulshada reer Hiiraan iyaga ayay u taallaa inay ka tashadaan aayahooda, cidkasta oo reer Hiiraan ahna waxaa looga baahan yahay inaysan isku mashquulin hawlo ay dabada ka riixayaan dad aan degaanka u dhalan oo qeyb ka ah dhibaatooyinka lagu xagal daacinayo nabad ku wada noolaashaha shacabka reer Hiiraan.
Shirkan lagu sheegay Mideyn ee Nairobi ay ku qabteen kooxo is urursaday waa mid u qaas ah Galmudug iyo taabaceeda, haddii ay ku midoobi karaan maamulka Galmudugna waxba kama qabno balse yeysan ku riyoon inay Hiiraan arrimaheeda qalqal ku abuuraan oo shaqsiyaad aan cidna metetlin u gacan haatiyaan, waxaana uga digeynaa inay Hiiraan faraha la soo galaan ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
Reer Hiiraan waxaa u yaalla inay cadawga naftooda iyo maalkooda dhibaatada ku haya iska xaaqaan iyagoo isku kalsoon oo wadajira ka dibna ay xoojiyaan midnimadooda iyo maamulkooda, waxaanna cod dheer ugu sheegaynaa cidkasta oo arrimaha Soomaaliya daneyneysa inay sidaas u ogaato oo aysan ku jaahwareerin ku tirikuteenka iyo kalaamuleylka ay wadaan kooxahaas baadida ah ee malasta loogu dhigayo magaca hiiraan.
War saxaafadeedka oo nuqul ka mid ah ay heshay shabakadda HS ayaa lagu soo gebagebeeyay Cid allaale ciddii isku dayda inay qalloociso ama carqaladeyso hannaanka iyo geeddi socodka dadka iyo degaanka Hiiraan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo quseysa xadgudubka uu ku kacay.
Marka laga soo tago war saxaafadeedka gudoomiyaha maxkamda sare ee dowlad goboleedka Hiiran State hadane shacabka ka soo jeeda deganada Mudug iyo Galgaduud ayaa hada dareensan in la joogo waqtigii ay shacabkaasi ku midoobi lahaayeen hal maamul oo metela dadka ka soo jeeda degaandaasi. kadib markii ay si rasmi ah u shaqeyn waayeen maamulo isku muuqda oo looga dhawaaqay xaafad ka tirsan magaalada Galkacyo iyo degmada Cadaado kediba waxaa soo raacay maamulo kale sida Mareeg oo iyaduna ka tiraan Galgaduud halka ay gobolkaasi dhinac ka sii joogaan maamulka Ahalusuna.
Degaanada Mudug iyo Galgaduud waa gobolada Somaliya ugu maamulka badan marka laga hadlayo gobolada dhexe warar laga helayo shacabka deganadaasi ayaa sheegaya in laga yaabo in dalka Somaliya dib loogu celiyo 8dii gobol taasi oo ka dhigeysa in Galgaduud ay dib u raacdo Mudug si taasi u dhacdane shirarka ay hada bilaabeen shaqsiyaad qurbaha ka tagay oo ay dalka mudo ugu danbeysay ayaan la ogeyn waxa ay ku soo siyaadin karaan dadka ka soo jeeda degaanadaasi.
· admin on October 25 2011 15:02:13 · 0 Comments · 1833 Reads ·
14,637,755 unique visits